Manorata tantara tsy mba miangatra ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manorata tantara tsy mba miangatra !
P.Prospère il y a 19 jours
Indro ary atolotra anao eto ny Matoan-dahatsoratra nivoaka tao amin’ny gazety Lakroan’i Madagasikara tamin’ny 4 jolay teo.
Hoy ny taratasy nosoratan’ilay ombiasy ho an’ny taranaka mandimby : « … Ny tantara tsy mba miangatra : tsy maintsy holazaina, raha tsy anio dia rahampitso, ny mety na tsy mety, na nataon’iza na nataon’iza. » Ny tantara tsy mba azo tapahana. Tsy azo foanana ihany koa satria voarakitra amin’ny fahatsiarovana samihafa. Rehefa mitokana fotodrafitrasa isika dia mivandravandra eo amin’ny tany sy ny toeram-panorenana ny dian’ny tantara. Sangan’asa no raiketin’ny tantara, toy ireo mahery fo sy tia tanindrazana namoy ny ainy ho fanavotana ny mpiara-belona aminy. Tsy maty ao am-pon’ny vahoaka ny anarany. Ireo tena tia tanindrazana dia tsy mba nirehareha ho nanao ny tantara na miseho ho tompon’ny tantara. Satria voarakitry ny tantara ho azy ny anarany. Ary velona ao am-pon’ny vahoaka. Tsy misora-tena ny tantara ka hamaritra ny hatretony. Tsy misy afaka hilaza koa anefa fa izy ihany no manao ny tantara.
Toy izany koa ny fanjakana repoblikanina. Tsy natao hialon-jafy ny fanjakana repoblikanina fa natao hamoriana ny zanaky ny firenena. Ny mpitondra dia miasa amin’ny maha repoblika ny fanjakana ary ny vahoaka no mandrefy ny zava-bitany. Tsy afaka misora-tena ho mahavita ny takian’ny repoblika ny mpitondra. Ny fahendrena dia ny miaiky fa mpanompo tsy mendrika, izay tokony natao aza tsy vita. Midadasika ny repoblika ary tsy voafetra ny miandry azy satria nisafidy ny hamaly ny hetahetam-pon’ny vahoaka izy.
Tsy afaka misora-tena anefa ny repoblika ka hilaza hoe teto amin’ny vanim-potoanako ihany no tena fanjakana satria nahavita be noho ny repoblika hafa izahay. Miandry mahazo ny vahoaka repoblikanina, fa tsy maintsy manompo ny mpitondra te ho repoblikanina. Dia hitsara antsika ny tantara. Satria koboniny ao am-pony ny marina. Raha ny Rocade-n’Iarivo vao notokana no anontaniana dia hilaza hoe « fiaraha-miasa maro no nahavitana azy », satria vola be 62,8 miliara no nilaina. 5 tapitrisa Euro avy amin’ny VOndrona Eoropeana, 28 tapitrisa avy amin’ny BEI, 24 tapitrisa avy amin’ny AFD. Ny an’ny Fanjakana malagasy dia 5,8 tapitrisa na 9%. Samy nitondra ampahany e ! Herikerika no mahatondra-drano e !
Noho ireny fiaraha-miasa ireny dia afaka nanomboka ny asa ny fitondrana Rajaonarimampianina sy ny HVM, toy ny nanaovany ny tohodrano ao Bevoay sy ny lalana Toliary-Morombe, ny seranam-piaramanidina ao Ivato, ny tetezana ao Mangoky, ny tohodrano ao Bevomanga… An’ny zanaky ny repoblika ireny ary fananan’ny firenena. Tsy mialon-jafy ny repoblika. Ny politika no mety samihafa, fa ny repoblika mbola miandry asa maro avy amin’ny zanany. Tsy manana loko afa-tsy « maitso – fotsy - mena » ny repoblikan’i Madagasikara. Ny ankoatra izay loko mety handalo sy miserana. Omeo loko sahaza azy ny repoblika dia hiorina mafy eo amin’ny firenena ny tantara tena izy.
Matoan-dahatsoratra : Manorata tantara tsy mba miangatra ! - il y a 19 jours
Matoan-dahatsoratra : De moka ratsy a ! - il y a 2 mois